Albert Heijn handao ny kitapo plastika ho an'ny voankazo sy legioma
Albert Heijn dia nanambara fa mikasa ny handao ny harona plastika ho an'ny voankazo sy legioma malemy izy amin'ny faran'ity taona ity. Ny hetsika dia hanala kitapo 130 tapitrisa, na plastika 243.000 kilao, amin'ny asany isan-taona. Nanomboka ny tapaky ny volana aprily, ...Hamaky bebe kokoa »
Fei Fei nankalaza ny andron'ny vehivavy
8 martsa, nandamina ny mpiasa vehivavy rehetra i FeiFei hankalazana ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy ary nanao fifaninanana ady-ady lehibe. Nahazo bonus malala-tanana ny ekipa mpandresy ary samy nahazo fanomezana ny mpandray anjara tsirairay avy. Hamaky bebe kokoa »
Ekipa mpitantana ny famokarana FeiFei JTEKT
28 janoary, ny tale jeneraly Andriamatoa Joe Lai dia nitarika ny ekipa mpitantana ny sampana mpamokatra hitsidika ny JTEKT Steering Systems (Xiamen) Co., Ltd ho an'ny fifanakalozana lalina amin'ny fitantanana 6S. Nanana fifandraisana lalina tamin'ireo mpitarika mifandraika amin'ny JTEKT FeiFei izahay ...Hamaky bebe kokoa »
Ny 13 janoary 2021, ny jeneraly jeneraly Joe Lai, dia nitsidika ny brigade polisy fifamoivoizana tao Xiamen Xinyang tamin'ny hetsika "fanolorana fitiavana", ary nanolotra sarontava miisa 3000 ho an'ireo polisy misahana ny fifamoivoizana izay nitazona sy niantoka ny filaminan'ny ...Hamaky bebe kokoa »
Tamin'ny 8 Janoary 2021, ny fivoriana fanao isan-taona an'ny Sales Department an'ny Xiamen Fei Fei bag Co., Ltd. dia natao tao amin'ny Grace Hotel. Ny fivoriana dia notarihin'i Miss Yan, mpitantana ny varotra, ary ny mpikambana ao amin'ny departemantan'ny varotra dia namintina tsirairay. Mahafinaritra ny ekipa mpivarotra ary ...Hamaky bebe kokoa »
Mpitondra fanjakana efatra eo an-toerana mitsidika an'i FeiFei
Manakaiky ny Fetin'ny Lohataona, ahafahana manao asa tsara amin'ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny valanaretina, ny 7 Janoary 2021, ny birao fahasalamana ao amin'ny distrikan'i Haicang, ny birao fitantanana vonjy taitra ao amin'ny distrikan'i Haicang, ny loharanon'olombelona ao amin'ny Distrikan'i Haicang ary ...Hamaky bebe kokoa »